Xildhibaanada Cusub ee Hirshabelle oo la dhaariyay iyo Gudiga (KMG) ee Doorashada oo la magacaabay. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Xildhibaanada Cusub ee Hirshabelle oo la dhaariyay iyo Gudiga (KMG) ee Doorashada...
Xildhibaanada Cusub ee Hirshabelle oo la dhaariyay iyo Gudiga (KMG) ee Doorashada oo la magacaabay.
Xildhibaannada Baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta la dhaariyay, Dhaarinta ka dibna waxaa ay xildhibaanada, Maxamuud Siyaad Barqadle u doortay inuu noqdo guddoomiyaha KMG ah ee shir guddoomin doona inta laga soo dooranayo guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle.
Xildhibaannada ayaa cod gacan taag ah ku doortay Maxamuud Siyaad Barqadle si hore loogu sii wado Arrimaha doorashada madaxda Hirshabeelle oo muddo xiloodkoodi uu dhamaaday.
Dhanka kale Guddoomiyaha ku-meel gaarka ah (KMG) ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Xildhibaan, Maxamuud Siyaad Barqadle ayaa isna magacaabay guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka Hirshabelle.
Gudigan oo ka kooban ilaa 9 xubnood ayaa Gudoomiye looga dhigay Xildhibaan Yuusuf Sheekh Xasan Macalin Jeelle waxayna shaqadoodu tahay ka shaqaynta sidii loo qaban lahaa doorashada guddoonka cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle.
Hoos ka aqriso Magacyada Gudiga.
Previous articleXildhibaannada Baarlamaanka 2-aad ee Hirshabeelle oo maanta la dhaarinayo.
Next articleKusimaha duqa Muqdisho oo dhagax dhigay waddo isku xirta bartamaha magaalada Muqdisho ”SAWIRRO” iyo Muuqaalka Warka.